Induction Brazing ithusi, ubhedu, ukushisa insimbi yensimbi
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / I-Induction Brazing
Isigaba: Induction Brazing Tags: ukubheka inqubo yokujoyina, ukukhishwa kwebhere, inqubo yokubumba, inqubo yokubumba ukushisa kokufudumeza, Ukukhishwa kwesibalo, Umshini Wokubamba Insimbi, Umkhiqizi womshini wokukhwabanisa, ukufudumeza lokungeniswa kokushisa
Induction Brazing iyinqubo yokujoyina izinto ezisebenzisa insimbi yokugcwalisa (futhi ngokuvamile i-sol-anti-oxidizing solvent ebizwa ngokuthi i-flux) ukujoyina izingcezu ezimbili zensimbi esondelene ngokuhlangana ngaphandle kokuqhaqhaza izinto ezisisekelo. Esikhundleni salokho, ukushisa okubangelwa ukushisa kuncibilikisa ukugcwalisa, okusho ukuthi kutholakale ezintweni ezisisekelo nge-capillary action.
Ukukhishwa kwe-induction Ungajoyina izinsimbi eziningana, ngisho ezifayo ezingenalutho. Ukukhishwa kwe-induction kuqondile futhi kuyashesha. Izindawo ezicacisiwe kuphela ezifudumele, ezishiya izindawo eziseduze nezinsiza ezingathinteki. Amajoyini alungile kahle aqinile, aphikisayo futhi aphikisana nokubola. Zibuye zihlanzeke kakhulu, ngokuvamile zidinga ukuqhutshelwa ukugaya, ukugaya noma ukuqeda. Ukukhishwa kwe-induction kuhle ukuhlanganisa emigqeni yokukhiqiza.
Izinqubo zokukhanga ze-DaWei Induction ingasetshenziselwa cishe noma yimuphi umsebenzi webhande. Kuze kube manje, amasistimu ethu asetshenziswa kakhulu embonini ye-electrotechnical ukuze akhonze izakhi ze-generator kanye ne-transfomerum njengemishayo, izinsimbi, izindandatho, izintambo nama-SC-izindandatho. Futhi balima amapayipi kagesi kanye nezingxenye ze-AC nokuzibopha embonini yezimoto. Umkhakha wezindiza usebenzise ukufakwa kwesibhakela ukushayela ama-fans blades, ama-casings, nama-fuel and hydraulic systems. Embonini ye-houseware amasistimu ethu agxilisa izingxenye ze-compressor, izinto zokushisa kanye namapayipi. Iyiphi imishini etholakalayo? Wethu Izixazululo zokugaya indle ngokuvamile kufaka uhlelo lokushisa lwe-DaWei Handheld Induction.
amathiphu okubuka i-carbide ngesingeniso
Izindwangu Zensimbi Zensimbi Engenayo Induction
I-Brazing Steel Tube iye ku-Tube yethusi ene-Heater Heating